नेपाल चिनाउनुछ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ३०, २०७६ प्रतिभा सुवेदी
एक पटकको कुरा— क्यानाडाको एउटा महिला संस्थाले एकपटक मलाई पनि वक्ताको रूपमा निम्ता पठायो । उक्त संस्थाले नेपाल र विभिन्न मुलुकमा साझेदारी गरेको थियो । विभिन्न मुलुकका अनुभव आदान–प्रदानका लागि मलाई क्यानाडा निम्त्याइएको थियो । त्यतिबेलासम्म नेपाल आजजति चिनिएकै थिएन । मलाई क्यारेबियन देश ट्र्रिनिडा टोबेगोबाट आएकी एक महिलासँग एउटै कोठामा राखिदिएका थिए, आयोजकले । हाम्रो भेट राति कोठामा भयो । उनले मलाई कुन देशबाट आएको भनी सोधिन् । मैले जवाफ दिएँ, नेपालबाट । मैले पनि सोधेंँ, तिमी कुन देशबाट ? उनले जवाफ दिइन्, ट्रिनिडा टोबेगोबाट । म त्यो देशको नामबाट र भौगोलिक अवस्थितिबाट अनभिज्ञ । उनी पनि मेरो देशको नामबाट अनभिज्ञ । दुवै जनाले आ–आफ्नो देश कहाँ पर्छ भनेर बुझाउन अलमल भएपछि मैले विश्वको एटलासमा हुनेजस्तो नक्सा बनाएँ अनि उनले पनि त्यसै गरिन् । त्यो दुबै जनाले कोरेका कागजका टुक्रा जोडेर निर्क्योल गरेका थियौं, हामी भूगोलको कुन गोलार्धमा रहेछौं भनेर । बल्ल मैले नेपाल विश्व नक्सामा कहाँ छ भनेर बुझाउनसकेँं । मैले धेरै समूहसँग नेपाल सगरमाथाको देश अनि बुद्धको जन्मस्थान भनी चिनाउनुपरेको छ ।
तीन दशक अघिसम्म नेपाल कहाँ छ भनेर प्रश्न गरेका सुन्दा म छक्क पर्थें । नेपाल कहाँ छ भनेर सोध्नेहरूलाई हाम्रो देश भारत र चीन बीचमा अवस्थित छ भन्नपर्थ्यो । त्यतिबेला मेरो मनमा भने नेपाल किन यसरी लुकेको होला जस्तो लाग्थ्यो । देश पनि चिनाउनैपर्ने रहेछ, नेपाल यति सुन्दर हुँदाहुँदै विश्वमा अपरिचित रहेछ जस्तो लाग्थ्यो ।
कतिपय पश्चिमा विश्वविद्यालय पुग्दा नेपालबारे धेरै अनभिज्ञ नै देखिन्थे । हालका दिनहरूमा नेपाल धेरै चिनिएको छ । केही राम्रा र केही नराम्रा व्यक्तित्वहरू र घटनाका कारण । दरबार हत्याकाण्डका समयमा अनि माओवादी द्वन्द्वका समयमा पनि नेपाल केही हदसम्म चिनिएको हो । चिकित्सा, समाजसेवा, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व, शेर्पादेखि साइकलयात्रीसम्मले नेपाल चिनाएका छन् । विभिन्न तह र क्षेत्रका नेपालीबारे राम्रा समाचार पनि सञ्चार माध्यममा आउन थालेका छन् । ‘नेपाली वमन राइजिङ’ सन् १९९३ मा प्रकाशनपछि म पश्चिमा मुलुकहरू र त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा अनुभव आदान–प्रदानका लागि बोलाइएँ ।
नपालको चिन्ने–चिनाउने कामसँग मलाई एउटा पुस्तकको सम्झना हुन्छ । ‘द विन्ड अफ चेन्ज इन अ माउन्टेन भिलेज इन नेपाल’ शीर्षकमा सन् १९९६ मा प्रकाशित पुस्तकमा जापानी लेखिका याओरी मात्सुईले बेथानचोक काभ्रेका महिलाहरूले गरेका संघर्षका कथा र आर्थिक उन्नतिबारे वर्णन गरेकी छिन् । उनले साडी र पटुकीको पहिरनमा भारी बोकेर उकालो उक्लिरहेका नेपाली महिलाहरूलाई भेट्दै अन्तर्वार्ता गरेकी थिइन् । सामुदायिक भावना भएको हाम्रो गाउँघरमा जीविका कठिन भए पनि सहरमा जस्तो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भैसकेको थिएन । विविध संस्कृति र हावापानी भएको रमणीय देश । जो पत्रकार र पर्यटकका रूपमा नेपाल आउँथे, उनीहरू हाम्रो सामुदायिक भावना अनि आतिथ्य सद्भावबाट प्रभावित थिए । उनीहरू भन्थे— तिमीहरूको देश सुन्दर र शान्त छ । म भने मनमनै सोच्थें— जीवनचाहिँ कष्टकर छ । आजभोलि यता आउने विभिन्न पत्रकार र पर्यटकहरू नेपाल रूपान्तरणको स्थितिमा छ भन्छन् । अहिले समाजमा धेरै–थोरै खैलाबैला छ, केही निराशा छ, केही आशा छ । जे भए पनि नेपाल चिनिँदो छ ।
प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ ०९:४८
राजनीति र अर्थनीतिमा स्वस्तिवाचन र वन्दना गरिनु स्वाभाविक हो । यस निम्ति भाटका ओठेभक्ति सदैव तत्पर रहन्छन् । यस्तैबाट ती नीतिमा मिथ्या, अहङ्कार र दम्भका ऐँजेरु पनि पलाउँछन् । उल्लिखित चार रत्नहरू सुयश, सेवा र सीपले राष्ट्रमय छन् । यिनमा को सानो र को ठूलो छुट्याउन खोज्नु मिस्री र महमा कुन बढी गुलियो (?) भनेर सोध्नु जस्तै हो ।
प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ ०९:४७